Toeram-pambolena 20 ambony indrindra any Afrika 2022 - Victor Mochere
Ny voly vola, toy ny kafe na vary, dia voly vokarina ho an'ny tsena azo amidy. Manodidina ny 20% amin'ny toekaren'i Afrika atsimon'i Sahara ny fambolena – isan-jato ambony noho ny faritra hafa rehetra maneran-tany. Avy any Nizeria ka hatrany amin'ny tany lonaka manerana ny Lohasahan'i Rift Afrika Atsinanana, ny kaontinanta dia fonenan'ny 60% amin'ny tany azo volena tsy voavoly eran-tany. Na eo aza ny sehatry ny fambolena midadasika ao Afrika, dia mbola misy ihany ny fahatapahan'ny famokarana.
Manoloana ireo fanamby ireo dia misy fivoarana ara-teknolojia maromaro afaka manatsara ny fari-piainan'ny tantsaha. Ohatra, ny teknôlôjian'ny precision dia mandrefy ny rotsak'orana, ny fampahafantarana momba ny tany ary ny vokatra azo avy amin'ny tany. Mandritra izany fotoana izany, ny teknolojia fandrefesana lavitra dia afaka manome fampahalalana momba ny toetrandro sy ny toetrandro. Izany, miaraka amin'ny ankamaroan'ny tany azo volena tsy voavoly eran'izao tontolo izao, dia manome fahafahana lehibe ho an'ny voly vola mandroso. Araka ny tombantombana iray, ny famokarana voamaina sy voamaina dia mety hitombo avo telo heny.
Ireto ny vokatra 20 ambony indrindra vokarina any Afrika.
Vary, paddy (mitovy amin'ny vary voatoto)
Voanjo, misy akorandriaka